စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များကို ဆေးစစ်၊ တိုက်ပွဲများ ဆက်ဖြစ်ဆဲ | Ko Oo + Ma Thandar
« ဈေးရွှေ့ပြောင်းမှု နေရာ မလုံလောက်၍ ဆန္ဒပြသူများကို ဖမ်းဆီး
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အင်အားစု တွေ့ဆုံမည် »
ဧရာဝတီ	Saturday, 25 December 2010 14:02
ယာယီ ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တဦးကို ဆေးစစ်ပေးနေစဉ်။ (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာ တကော်ကျိုး တောင်ကုန်းမှ DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့။ (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
မြ၀တီခရိုင် ဖလူးဒေသတွင် DKBA နှင့် နအဖ ခြေလျင်တပ်ရင်းများ ယမန်နေ့ နံနက် ၆ နာရီကျော်မှ မွန်းလွဲ ၁ နာရီအထိဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တိုက်ပွဲတွင် ဖလူးရွာသားတဦး လက်နက်ကြီးကျည် ထိမှန်သောကြောင့် မဲဆောက်ဆေးရုံကြီးသို့ ရောက်ရှိလာကြောင်း၊ ဆေးကုသမှုကိစ္စများကို နိုင်ငံတကာ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ (ICRC) က တာဝန်ယူပေးထားကြောင်း သိရသည်။
ဖလူးလေးရွာရှိ စစ်ရေးအရ ဗျူဟာကျသည့် တောင်ကုန်းကို DKBA အဖွဲ့မှ သိမ်းယူရန် တက်ရောက် တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
This entry was posted on December 25, 2010 at 12:05 pm and is filed under ဖြန့်ဝေခြင်း, News.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.